नेइमारले गरे २ गोल, पिएसजीको लगातार आठौं जित ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेइमारले गरे २ गोल, पिएसजीको लगातार आठौं जित !
एजेन्सी । पेरिस सेन्ट-जर्मेन, पिएसजीले फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा शानदार जितको यात्रा कायम राखेको छ । लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा पिएसजीले १० खेलाडीमा सीमित भएको निसमाथि ३-० को जित निकालेको छ ।
लिगमा लगातार आठौं जित निकाल्ने क्रममा नेइमारले दुई तथा एनकुकुले एक गोल गरे । ५९ औं मिनेटमा साइप्रिन दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि निस १० खेलाडीमा सीमित भयो ।
याे पनि पढ्नुस मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्राजिल विजयी, नेयमारको उत्कृष्ट पुनरागमन
पिएसजीले त्यसअघि नै दुई गोल गरिसकेको थियो । नेइमारले २२ तथा एनकुकुले ४६ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । यस्तै नेइमारले इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा गोल गरेपछि पिएसजी ३-० ले विजयी भयो ।
ट्याग्स: Neymar, PSG, PSG Vs Nice